Maka nbudata Firefox 8 | Site na Linux
Dị iji budata Firefox 8
Anyị nwere ike ibudata ụdị ọhụrụ nke Firefox, ọ bụ ezie na ọkwa ahụ emebeghị ọkwa site na otu nke Mozilla.
Ozugbo a tọhapụrụ ya na eze, anyị ga-ewetara gị ozi kacha atọ ụtọ, mana ugbu a anyị maara na otu n'ime akụkọ kachasị atọ ụtọ bụ njikọta na Twitter site na ogwe ọchụchọ, ebe anyị nwere ike elu, aha njirimara, na ihe ndị ọzọ.
Ọzọkwa otu n'ime akwụkwọ akụkọ ndị ọhụrụ bụ na ndị ọzọ tinye-ons agaghị arụ ọrụ na ndabara, yabụ onye ọrụ ga-eji aka ya mee ya mgbe ọ natara ịdọ aka ná ntị.
Download na Spanish.
Maka m M ka na-arapara na nsụgharị 7.0.1 ruo mgbe plugins m na-eji dị na Firefox ọhụrụ 8. Echere m Mozilla Ekwesịrị m ịrụ ọrụ na nke ahụ kama iitatingomi Google Chrome.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Dị iji budata Firefox 8
Ọ bụ ezie na Chrome na-emeri n'ọgụ ahụ nke nta nke nta, Firefox yiri ka ọ etinyela batrị ma chekwaa maka nchekwa na-adịghị emerụ ahụ. M gụrụ ya ebe a: http://www.nortonfanclub.com/2011/1
Daalụ maka SPAM Hahaha
ohuru nke firechrome, ihe m na-ekwu bu ... Firefox xD
Anaghị m enwe mmasị n'ụzọ Firefox na-agbaso ma ọlị, ka anyị hụ ma ọ bụrụ na mmadụ ejiri ndụdụ na-eme ihe na-adịghị mma banyere mmegharị chrome
Ma ọ bụghị nke ukwuu. Agbanyeghị Iceweasel na-eso nzọụkwụ Firefox.
Amaghị m ọtụtụ ihe gbasara ọrụ Iceweasel, belụsọ na ọ bụ mbipute 100% na-emeghe ma na-emeghe. Ọ nwere uru iji ya? Dị ka mgbe niile, daalụ Elav.
Iceweasel bụ Firefox n'ezie mana o nwere aha dị iche na ụfọdụ ihe gbanwere agbanwe (ajụkwala m ihe ha bụ, maka na amaghị m ha n'ezie).
"VERSIONITIS" na - achịkwa onye obula, agbanyeghi ngwusi azu.
N'otu aka o doro anya na enwere mgbanwe na njirisi ọnụọgụ nke nsụgharị ya. Ọ bụrụ na ha gara n'ihu na 3.1, 3.2, 3.5, 4, 4.2, wdg. Ma ọ nwere ike ọ gaghị akarị nke ahụ. Ugbu a oge ọ bụla ha jikọtara ọrụ ọhụrụ, ọbụlagodi na ọ dị obere, a na-akpọ ụdị ahụ na ntinye nke na-esote.
Enweghị m nchegbu na ọnwa ole na ole ọ na-eme ka ọnụọgụgụ ya n'ụzọ ahụ. Ihe dị mkpa bụ na ha na-aga n'ihu na-eto eto ma na ha na-agba mbọ iji meziwanye ma mepụta ihe ọhụrụ.
Ihe dị m ka, ikekwe, nsogbu, bụ na ụfọdụ ndọtị dị mkpa na-agbachi n'azụ na-enweghị ike ijide ụdị ọhụrụ Firefox ọ bụla.
Achọtara m edemede na-akọwa nke ọma usoro mmepe ọhụụ nke Firefox na ngbanwe n'ụkpụrụ ọnụọgụ nke nsụgharị ahụ. Nwere ike ịchọta ya ebe a http://mozillavenezuela.org/2011/05/24/el-nuevo-ciclo-de-desarrollo-de-firefox/
Debian + KDE: Ntinye na nhazi
Linux: "Egwuregwu karịrị"